Tuesday, 04.07.2020, 04:35pm (GMT+5.5) Home Contact
प्रजातन्त्रमाथि बलात्कार : धार्मिक आस्थामा कुठाराघात
Wednesday, 03.09.2016, 11:23am
देशलाई अनेक खण्डमा बाँड्ने अनि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता खोज्ने योभन्दा ठूलो मूख्र्याई अरु के होला ? भन्ने परिचर्चा आज व्यापक भएको छ एकातिर भने अर्कातिर जनताका यावत् समस्या समाधान हुने संविधान बनायौं भन्नेहरु नै त्यही संविधानका पक्षमा छैनन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा, जनमोर्चा समेतले मन नपरे पनि संविधान स्वीकार्नुपरेको भनिरहेका छन् किन ? तिनैका भनाइबाट पनि कतैको दवाव या बाध्यताले गर्दा देशको परम्परा, धर्म–संस्कृति र मान्यता नसुहाउँदो भए पनि स्वीकार्न बाध्य छन् भन्ने बुझिन्छ । जनताले त परै छोडौं, दलीय नेताकै आत्माले स्वीकार गर्न नसकेको संविधान मान्नुपर्ने कस्तो बाध्यता उनीहरुलाई परेको हो ? यस्तो स्थितिबाट देश उँभो लाग्ला ? यो त गम्भीर समस्या पो हुन आएको छ ।
महाशिवरात्रि पर्वको पाशुपत क्षेत्र ः नागाहरू र परिदृश्य
Wednesday, 03.09.2016, 11:22am
विश्वमा धेरै धर्म, मत, सम्प्रदायहरू प्रचलित छन् । एउटै मूल धर्म अन्तर्गत धेरै सम्प्रदाय देखिन्छ भने अनगिन्ती सम्प्रदाय अन्तर्गत पनि अनेकौं शाखा, उपशाखा र मतान्तर रहेका छन् । हरेक धर्म सम्प्रदायका दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श, उपासना, आराधना, प्रार्थना र अर्चना विधिबीच पनि वैविध्यता, मतान्तर, विरोधाभास एवं अन्तर्विरोध देखिन्छ ।
“अजापुत्रो बलिंदद्यात् दैवो दुर्बलघातकः”
Thursday, 02.18.2016, 07:36am
टाउकै कुहेपछि शरीरका अंग–प्रत्यंग संक्रमित हुनु स्वाभाविक भयो । ‘जो अगुवा उही बाटोमा हगुवा’ भैदिएपछि कसको के लाग्यो । भ्रष्टाचारको त्यो कुहीगन्ध क्यान्सर फैलिएजस्तै आज प्रत्येक तहमा फैलिएको छ । नाराले मात्रै सुधार हुने होइन । केही गर्ने हो भने सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीदेखि नै सुधार थाल्नुपर्याे । तेरो र मेरो भन्नुभएन, योग्यता र क्षमतालाई मान्नुपर्याे । नेता र प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्याे ।
सुशील कोइरालाको अवशान र कांग्रेस अधिवेशन
Thursday, 02.18.2016, 07:34am
सुशील कोइरालाको अवशानले नेपाली कांग्रेसको बी.पी. कोइराला पुस्ताको नेतृत्वको अन्त्य भएको छ । यद्यपि उमेरका हिसावले सुशील कोइराला आपैंm दोस्रोपुस्ताका नेतामध्येकामा गनिन्थे । तर वी.पी.का काका र सानीआमाका छोरा भएकाले उनी वी.पी.पुस्ताकै मानिन्थे । यथार्थता पनि त्यही थियो । यस हिसावले “ने.का.को तेह्रौं महाधिवेशनले दोस्रोपुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अव बूढो–पुरानो पिंढीको हातमा नेतृत्वको बागडोर दिनुहुँदैन” भन्नेहरुलाई दोस्रोपुस्तामा नेतृत्व जान नदिने एकमात्र बाधकको रुपमा देखापरेका सुशील कोइरालाको देहावशानले बाटो सफा भएको अनुभूति गर्ने र चैनको सास फेर्ने अवसर प्राप्त भएको छ,” भनिदिंदा हुने भएको छ ।
ठूलो पदमा पुग्दैमा कोह लायक हुँदैन
Wednesday, 01.13.2016, 12:57pm
हिजोआज समाचारपत्रहरुमा अपहरण, लुट, डकैती, हत्या, बलात्कार जस्ता समाचारलाई कम र राजनीतिक समाचारलाई बढी महत्व दिइदै आएको देखेर समाज विकसित र सभ्य भएको हो कि भन्ने भान पर्नसक्छ, तर वास्तविकता भने बेग्लै छ । यहाँ अरु विकासभन्दा पनि नेताकै मानसिक विकासको खाँचो छ । राजनीति गर्नेहरु कल–बल–छल जसरी भए पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री भएको सम्झन्छन् । एकमात्र लक्ष्य कुर्सी प्राप्ति र त्यसलाई जोगाउने अनेक बहाना एवं प्रचारवाजीमा समय र साधन खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।
अब त चेत ! (अब पनि नचेते कहिले चेत्ने ?)
Wednesday, 01.13.2016, 12:56pm
दुई तीनवर्ष अघि पश्चिमाञ्चल विकासमञ्चले एउटा स्मारिका प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा मेरो एउटा लेख प्रकाशित थियो । “अहिले असम्भव देखिए पनि, भविष्यमा सम्भव छ” भन्ने त्यसको शीर्षक थियो ।
संविधान : देउसी–भैलो भट्याए जस्तो
२००७ सलदेखि नै यहाँ भारतको हस्तक्षेप जारी छ । त्योबेला नेपालको मन्त्रिमण्डल बैठकमा भारतीय सल्लाहकार र राजदूत बसेर निर्णय लेखाउँथे । त्यो बेलाको सरकारले त्यस्तै बानी बसालिदिएकाले भारतीयहरु पल्किएका हुनाले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले त्यो प्रथा बन्द गरिदिएपछि रिसाउन थालेका हुन् ।
अब कस्तो संविधान ?
Tuesday, 01.05.2016, 11:27am
अब यो देशमा यसरी नै “राष्ट्रिय अस्तित्व, अस्मिता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र जनताको अलख जगाउँदै सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हिड्ने” राजनीतिक पेशा व्यवसायीको परिचय दिने साधु विराला र उनले पचासौंपटक नयाँ नयाँ संविधान बनाउने र पोल्ने गर्याैं भने निश्चित छ, मृत्युशैय्यामा पुगेका राष्ट्रिय अस्तित्वलाई वचाउने छैनौं । अब यस्तो स्थितिमा एउटै झीनो सम्भावनाको झिल्को देखिएको छ ।
सरकार संचालन र आजको वास्तविकता
Tuesday, 12.22.2015, 12:24pm
सिगरेट–बिंडी–खैती–सुर्तीको लत बसेकालाई ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने सूचनाले असर नगरे जस्तै भस्मासुरे नेतालाई पनि प्रजातन्त्र भनेको ‘जनताका लागि जनताद्वारा जनताले नै संचालन गर्ने राज्यव्यवस्था हो’ भन्ने राजनीतिक सूत्रले पनि काम नगर्ने रहेछ । परिणाम प्रजातन्त्रको यहाँ उपहास भएको छ । प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता नै समाप्त पारिएका छन् । व्यक्तिगत र स्वार्थले गर्दा बिना लगानीको कमाउने पेशा बनाइएको छ प्रजातन्त्रलाई । जनताप्रति विश्वासघात गरिएको छ । यो सानो मुलुकमा पार्टीहरुकै संख्या सय नाघिसकेको छ । तीमध्ये अधिकांशको कुनै जनाधार छैन । च्याँखे थापेर सत्तामा पुग्ने व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।
उनीहरु र यिनीहरु
Tuesday, 12.22.2015, 12:22pm
अहिले नेपालमा मधेसवादीहरले मधेसी मोर्चाको ब्यानरमा महन्थठाकुरलाई तराई मधेसको गान्धी भनेर प्रचार गरिएको छ । केहीदिन पहिलेमात्र त्यस आन्दोलनका नेताहरुले दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीसँग “गुफ्तगू” गरेर आएको समाचार प्रकाशित भयो । यसबेला त्यसबेलाका ती सिक्किमेली दुई महिला होपकूक मारिया र इन्दिरा गान्धीको कारण सिक्किमको स्वतन्त्रताको हत्याएको थियो ।
हिमाल–पहाड–तराईको : शास्त्रीय र पर्यावरणीय महत्व
Tuesday, 12.15.2015, 12:09pm
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लमतन्न परेको समथर भूभागलाई मधेश भन्दै त्यहाँ दुई प्रदेशको माग गर्ने स्वदेशीको आन्दोलन र विदेशीको नाकाबन्दीले सो क्षेत्रसंगै सिंगो नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । काठमाडौंमा बातानुकूलित कोठामा बसेर राष्ट्रियताका ठूलठूल गफ हाँकेर बस्नेहरूले जनताको त्यो पीडा महसुस गर्न सकेका छैनन् । अनि तराईलाई मधेश बनाएर त्यहाँका केही ठालूहरूलाई महाराजा बनाउने उद्देश्यको बिरुद्धमा पनि तराई (मधेश)को वास्तविकता अनि ऐतिहासिक–पौराणिक, अझ शास्त्रीय महत्व बुझाउन सकिएको छैन ।
विवश पारेर शर्तपालन गराइ छोडे !
Tuesday, 12.15.2015, 12:07pm
नेपाल र भारतबीच यदाकदा समस्या उत्पन्न हुनेको मूल कारण हाम्रो भूराजनीतिक अप्ठ्यारो हो भने केही स्वार्थी राजनीतिक व्यक्ति पनि सहायक बन्न पुग्छन् । त्यही भूराजनीतिक अवस्थाले पनि छिमेकी भ्रममा परेर हामीप्रति शंका गर्न थाल्दा हाम्रा लागि समस्या हुने गरेको छ । भित्री कुरा हुन्छ उनीहरुका ठूलठूला आकांक्षाको, तर बाहिरबाट सुरक्षाको नाम लिइन्छ । त्यसपछि खुलेरै अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्न थाल्दा सानै भए पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका हामीलाई नरमाइलो लाग्नु स्वाभाविक हुँदोरहेछ
बाजेदेखिको “कोदाको ऋण” नातीपुस्ताबाट असुल्दैछन् मोदी
Tuesday, 12.15.2015, 12:06pm
नेपालको संविधान नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सभाले निर्माण गर्नेछ” भनेर २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए । जुनबेला उनले त्यस्तो घोषणा गरेका थिए, त्यसबेला निरंकुश राणा अधिवंशवादी १०४ वर्षको शासनको विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा पनि गरिरहेका थिए ।
भारतको नदीजोड योजना र मधेश आन्दोलनको सम्बन्ध
Tuesday, 12.01.2015, 02:55pm
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी, भारत जनसंख्यामा विश्वकै दोस्रो ठूलो देश । दुबै मुलुक छिमेकी भएका कारण एकको स्वार्थ अर्कोले हेर्नुपर्छ । तर, नेपाल र भारतको हकमा भने त्यो एकोहोरो मात्र हुने गरेको छ । नेपालको विकासको नाममा भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिरहेको छ । यसैको एउटा कडी हो ‘नदी जोड योजना’ भारतको बढ्दो जनसंख्यासंगै सुख्खापन पनि बढिरहेको छ ।
दिशाहीन राजनीति : विवेकहीन नेता
Tuesday, 12.01.2015, 02:51pm
नेपालका नेता छिपकिली भएका छन् । भित्तामा टाँसिएको छिपकिली म यहाँबाट हटें भने यो भित्तै भत्कन्छ, किनभने यसलाई मैले नै अड्याएको छु भन्ठान्छ रे । यहाँका नेता पनि हामीले सरकार छोडे सबै विग्रन्छ, हामी नै सधैं सरकारमा बसिरहनुपर्छ भनेजस्तो गर्छन् र कसैले पनि कसैलाई अडिएर काम गर्न दिंदैनन् । दिइहाले पनि ढंग पुर्याएर विवेकले शासन व्यवस्था चलाउने क्षमता कसैले देखाउन सकेनन् ।
“देशको भविष्य”बारे मैले दिएको जवाफ...
Tuesday, 12.01.2015, 02:46pm
अहिले विश्व मानचित्रमा “नेपाल” भनेर भनिने भूखण्डमाथि खग्रास ग्रहण लागेजस्तै छ । वाह्य प्रभाव बढ्दै गएको छ । त्यस्को भन्दा त्यस्का भरिया– करिया (दलाल) हरू आप्mनै बारीको फलवोट निस्केको छिचिमिरा जस्तै देखिएका छन् उनीहरू । गतिविधिले आगो र वीष छदाईरहेको छ । त्यो सबै आप्mना लेखबाट पोख्न वाध्य पारिरहेको आत्मबोध गर्न पुगेको छु ।
दोस्रोपटक जापान पुग्दा (५)
Tuesday, 12.01.2015, 02:42pm
एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति एसीसीयुले अवलम्बन गरेका रणनीतिविरुद्धको सामान्य जानकारी दिने काम ओयागी शिगेरुबाट भएको थियो । त्यसपछि सहभागीहरूलाई दुई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर प्रत्येक समूहमा सो समूहसित सम्बद्ध राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई आ–आफ्नो मुलुकका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो ।
मधेसवादीको भेषमा भाडाका लडाकाहरुको नेपाल प्रवेश किन ?
Wednesday, 11.25.2015, 12:53pm
झण्डै दुई महिनादेखि नेपालको चूरे भावर क्षेत्र दक्षिण घाँेचमा आधा शताब्दीअघि निर्माण प्रारम्भ भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गभन्दा तलका गतिविधि वा आन्दोलनको स्वरुप र दुलोभित्र गुटुमुटिएको सर्प झण्डै उस्तै उस्तै लागिरहेको छ । बीचको अलिकति ढाड देखिएको सर्पको मुख कता र पुच्छर कतातिर छ भन्ने एकीन गर्न नसकिएजस्तै मधेसवादीहरुको आन्दोलन, त्यस्को उद्देश्य र अन्तिम लक्ष्य अरुलाई त के स्वयं महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरुलाई समेत थाहा नभएको जस्तो लाग्छ । त्यसबारे राम्ररी थाहा भएकामा ए.वी.माथुर ‘रअ’ साउथ ब्लक बाहेक र अलिकति थाहा भए रंजित रेलाईसम्म होला ।
मूलजरो संघीयता ः नाकाबन्दी त चिन्ह मात्र हो
नेता त्यो हो जसले प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल स्थिति तयार पारेर काम गर्न र गराउन सक्छ । नेतृत्वले अरुलाई उपदेश दिने र अह्राउने मात्र हैन, स्वयंले तदनुकूल काम गरेर पनि देखाउन सक्नुपर्छ । तर, नेतृत्वमा हुनुपर्ने आवश्यक गुण र क्षमता नभएकाले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन । त्यस्तो नेतृत्व अप्ठ्यारो आइपर्दा स्वयं कुइराको काग भएर अरुलाई दोष दिन थाल्छ ।
भारत नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजिरहेको छ
Wednesday, 11.25.2015, 12:51pm
राजावादी, मधेशवादी र भारतीय विस्तारवादले आफ्ना आवश्यकतानुसार संविधानको निर्माणमा कैयौं व्यवधानहरू पैदा गर्ने प्रयत्न गरे । त्यस सन्दर्भमा खास गरेर भारतीय विस्तारवादले त्यसमा सबैभन्दा बाधाहाल्ने वा उनीहरूका सुझाव अनुसार संविधान नबनेमा त्यसलाई बन्न नदिन वा जारी हुन नदिन पूरा शक्ति लगाए । त्यो अवस्थामा पनि संविधानको निर्माण हुनु सामान्य कुरा थिएन । संविधान बनेपछि त्यो संविधानका विभिन्न सकारात्मक पक्षहरू उल्टाउन प्रयत्न भैरहेको छ ।
» नाकाबन्दी : पृष्ठभूमि र शृङ्खला
» मोदीको ‘ऋषिमन’भित्र प्रच्छन्न दानवी चिन्तन
» तातो न छारो ‘नयाँ नेपाल’ भन्दै भुँडी भर्दै
» किन क्रुद्ध भए मोदी र रौद्र रुप लिए ?
» संसद : मर्यादाहीन विवादको अखडा
» मोदीको गोदीमा किन गए मधेसवादीहरू
» दोस्रोपटक जापान पुग्दा (३)
» आफैं अडिलो हुनुपर्छ, बिलौनाले हुँदैन
» म मन्र्या हुँ मर्छु, तर ...
» दोस्रोपटक जापान पुग्दा
» पुच्छर डालाउनेसित होइन, मालिकसित कुरा गर
» देशमाथिको नाकावन्दी नालीवेली र सन्देश
» नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाउने काम
» अहिल्यै हर्ष बढाई नगरौं ः संपरीक्षण गरौं
» नेता हौं भन्नेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो
» परित्यक्त “नेहरू–नीति” को परिणति नेपालको दुर्गति ! (?)
» जापान भ्रमणको सम्झना गर्दा
» ज्ञान–विज्ञान–प्रविधि, नीति–संहिता र ऋषि परम्परा
» टीकापुर हत्याकाण्ड : चरम लापर्वाहीको नमूना
Page 7/21: « :: ...4567 8910 ... :: »